Haingo - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Zava-dehibe iray hafa hanatratrarana ny bika tadiavinao dia ny fomba fahavitan'ny fonosanao.
Manolotra safidy maro isan-karazany ianao hisafidiananao azy, ao anatin'izany ny loko in-bobongolo, ny famafazana anatiny sy ivelany, ny metaly ary ny famafazana toy ny voahangy, matte, fikitika malefaka, famirapiratana ary fanala.
Ny famolahana ny tsindrona dia dingan'ny famokarana amin'ny famokarana ampahany amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fitaovana mafana sy mifangaro, toy ny vera sy ny plastika, ao anaty lasitra iray izay mampangatsiaka sy manamafy ny fikirakirana ny lavaka. Ity no fotoana mety indrindra hahatonga ny loko tadiavinao ho ampahany amin'ilay fitaovana mihitsy, fa tsy ampiana aorin'izay.
LOHATENY INNER / OUTER
Ny famafazana fitoeram-bozaka dia manome ny fahaizana mamorona loko, endrika, volavola, na zavatra hafa namboarina - na vera na plastika. Araka ny tondroin'ny anarana, dia ampifangaroina ireo kaontenera amin'ity dingana ity mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina - avy amin'ny fijery mangatsiaka, ny fahatsapana vita amin'ny endrika, ny lokon'ny loko manokana ho an'ny famaranana ny famolavolana, na amin'ny endrika famolavolana azo eritreretina miaraka amin'ny loko maro, ny fades na ny gradients.
Ity teknika ity dia mamerina ny fijerin'ny Chrome madio amin'ny kaontenera. Ny fizotrany dia misy ny fanafanana fitaovana metaly ao anaty efitrano fantsona mandra-pahatongan'ny etona. Ny metaly etona dia mifintina ary mifatotra amin'ny kaontenera, izay ahodina hanampiana amin'ny fiantohana ny fampiharana fanamiana. Rehefa vita ny fizotran'ny metaly dia arotsaka ao anaty kaontenera ny akanjo ambony miaro azy.
Ny embossing dia mamorona sary nakarina ary ny debossing dia mamorona sary recessed. Ireo teknika ireo dia manome lanja marika amin'ny fonosana amin'ny alàlan'ny famoronana endrika logo tokana izay azon'ny mpanjifa kasihana sy tsapan'izy ireo.
Ity teknika fanaingoana ity dia fomba iray hafa amin'ny fampiharana ny lamba landy. Ny ranomainty dia afindra amin'ny ampahany amin'ny alàlan'ny tsindry sy silily mihodina na maty. Ho an'ny loko marobe na marika misy antsasaky ny feony dia azo ampiasaina ny marika famindrana hafanana izay hanome ny kalitaon'ny loko, ny fisoratana anarana ary ny vidin'ny fifaninanana.
Hydro-graphics, fantatra amin'ny anarana hoe pirinty fanitrihana, fanontana rano famindrana, sary fitaterana rano, fanondrahana hydro na fanontana cubic, dia fomba fampiharana ny endrika vita pirinty amin'ny sehatra telo-habe. Ny fizotran'ny hydrografika dia azo ampiasaina amin'ny vy, plastika, vera, ala mafy, ary fitaovana maro samihafa.
Ao amin'ny tarehy fanatsarana tarehy, hatsaran-tarehy ary fikarakarana manokana, ny famonosana koa dia momba ny lamaody. Ny fonosana frosted dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampisehoana ny fonosanao eo amin'ny talanton'ny mpivarotra.
Na volom-panala na endrika mamirapiratra io dia manome endrika tsara tarehy ny fonosanao.
FANASITRANANA MAFANA / FOIL
Ny fametahana hafanana dia teknika iray ametrahana foil miloko eo amboniny amin'ny alàlan'ny hafanana sy tsindry. Ny fametahana mafana dia mamokatra endrika manjelanjelatra sy tsara tarehy amin'ny fantsom-bolo, tavoahangy, siny ary fanakatonana hafa. Ny foil miloko dia volamena sy volafotsy matetika, fa misy lokony vita amin'ny alimina sy loko opaque koa azo alaina tsara ho an'ny famolavolana sonia.